Aiza No Hahitana Eoropa Tena Mahafinaritra Ny Maritrano | Save A Train
Home > Travel Europe > Aiza No Hahitana Eoropa Tena Mahafinaritra Ny Maritrano
Mitady hahita ny sasany amin'ny maritrano faran'izay tsara indrindra amin'ny fialan-tsasatrao manaraka? Raha izany, tsy mety misy toerana tsara kokoa noho ny Eoropa ho anao. Na ianao liana amin'ny fomba maritrano kilasika, na manantena mahita ny sasany kely-fantatra firavaka, Eoropa tanàna no nanarona. Ndeha isika hijery ohatra vitsivitsy ny mahafinaritra maritrano ary aiza ny hahita izany rehetra:
tsara tarehy Architecture: Italia
Italia Feno ny tanàna sy ny zana-bohiny izay afaka mitandrina tsara tarehy very trano. Na ianao ao Roma na Florence, zoro rehetra dia mendrika ny sary. Ho an'ny mpizaha tany mitady tanàna kely tsara tarehy, Vicenza no toeran-kaleha. Izany dia midika hoe akaiky ny raha ianao naka ny lamasinina na avy any Venice, izay mendrika ihany koa ny fitsidihana. Raha Vincenza dia malaza noho ny Renaissance maritrano fomba torontoronina tao an-tsaina ny Andrea Palladio, Venetian trano dia matetika Gothic, hamelabelatra, ary tsara tarehy.
Anisan'ny tanàna Zavatra hafa tsy afaka malahelo, Roma sy Florence miavaka ihany koa toy ny favoris. Roma dia tena feno ny mari-toerana Mba tsy hahita ny olon-drehetra indray mandeha ny androm-piainany. ny Colisée, St. Petera Basilica, Pantheon, ary amin'ny loharanon'ny Trevi mendrika ny hitsidika azy rehetra. Etsy ankilany, Florence manana fifangaroan'ny fomba samy hafa, indrindra indrindra fahiny grika sy romanina trano, Gothic sy ny Renaissance.
tsara tarehy Architecture: Frantsa
Frantsa no an-trano ho tanàna vitsivitsy isan-karazany ny fomba izay mamela na Asa Lehibe Architecture tia breathless. Anisan'ireo voalohany kandidà ho fitsidihana, Strasbourg, Bordeaux, ary Paris Azo inoana fa manolotra indrindra.
Misy be dia be ny mahita sy atao in Strasbourg, anisan'izany ohatra ny Gothic lehibe maritrano, mifamatotra amin'ny maoderina sy postmodern distrika sy ny Alsatian trano. Miavaka koa Bordeaux. Ny tanàna lehibe indrindra any amin'ny faritr'i Aquitaine Mirehareha iray tamin'ny taonjato faha-18 mahafinaritra faritra an-drenivohitra, Lapan'ny ny Bourse, ary Cathedral Saint Andre. Farany, Paris no nalaza ho iray amin'ireo birthplaces ny Gothic maritrano, fa izay koa manan-karena isan-karazany ohatra ny Belle Epoque sy Art vaovao.
Maro ireo an'ireo trano vatosoa mba ho hita ao Alemaina. Na izany aza, roa miavaka indrindra ireo dia Berlin ary Rothenburg. Architecture mandeha matetika akaiky amin'ny tantara, ary afaka mahita izany fifandraisana mazava tsara ao Berlin. Ny tanàna nisara-tsaina, tsy nisy indray mandeha, ary izany no hita maso mazava tsara any amin'ny toerana sasany. Izany no mahatonga azy ho toerana lehibe traikefa singa samihafa ny maritrano sy ny manao antsitrika lalina tao ny tantara fitaoman ny kanto.
Etsy ankilany, Rothenburg dia toerana mijery tahaka ny zava nizotra avy ny Fairy-angano. Zavatra tsy te hatory, tamin'ny Moyen Âge tarehy tanàna dia mpizaha tany toerana tena. Tena Ohatra voalohany ny kanto Eoropa tamin'ny Moyen Âge trano sy ny tanàna sy ny manda gabled tafo.
Stuttgart ho Rothenburg Lamasinina
Nuremberg ho Rothenburg Lamasinina
Eoropa mendrika nandeha ny alalan ', ary mbola misy maro hafa koa izay toerana tsara tarehy tokony hiezaka mba hitsidika. Trano tsara tarehy no be England, Belzika, Aotrisy, Soeda, ary ny Pays-Bas ihany koa.
Raha vonona ianao au livre ny saran-dalana noho ny maritrano imason'ny-mahita iraka ny nofy, mitraka ny toerana amin'ny Mamonjy Train.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmagnificent-architecture%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)